तालिबानका नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई कसले गर्यो अपहरण ? विश्वभर तरंग — Sanchar Kendra
एजेन्सी। अफगानिस्तानको तालिबान सरकारमा आपसी फुट आएको छ । बीबीसीले विभिन्न तालिबान स्रोतको हवाला दिँदै तालिबानको अन्तरिम सरकारमा फुट आएको जनाएको छ । तालिबान स्रोतले बीबीसीसँग उपप्रधानमन्त्री मुल्लाह गनी बरादर र अन्तरिम सरकारका एक सदस्यबीच गत हप्ता राष्ट्रपति भवनमा भनाभन भएको सो क्रममा दुई समूहबीच झडप भएको जनाएको छ ।
समाचार अनुसार अन्तरिम सरकारमा प्रधानमन्त्रीका दाबेदार रहेका बरादरलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएपछि उनी असन्तुष्ट थिए । बरादरको समूह शक्तिशाली हक्कानी नेटवर्कबीच आपसी मतभेद रहेको छ । हक्कानी नेटवर्कका संयोजक सिराजद्दिन हक्कानी अन्तरिम सरकारमा गृहमन्त्री छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा बरादर सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नदेखिएपछि उनको मृत्यु भइसकेकोसमेत हल्ला चलेको छ । तर, बीबीसीसँग तालिबान स्रोतले ती हल्लाहरुमा सत्यता नभएको बताएको छ । तालिबान स्रोतले सुरुमा बरादर काबुल छाडेर कंधार गएको बताएको थियो भने पछिल्लो पटक बरादर थाकेकाले आराम गरिरहेको बताएको छ ।
सोमबार बरादरको भनिएको एक अडियो टेप सार्वजनिक गरिएको छ । सो टेपमा बरादरले आफू जहाँ भए पनि ठिक अवस्थामा रहेको बताएका छन् । बीबीसीले यो अडियो टेपको स्वतन्त्र पुष्टि गर्न नसकिने बताएको छ । अफगानिस्तानको सत्तामा पुगेपछि तालिबानमा जितको श्रेय लिने विषयमा आपसी मतभेद भएको जनाइएको छ ।
बरादरले आफ्नो कूटनीतिका कारण तालिबानले सफलता पाएको बताउँदै आएका छन् भने हक्कानी नेटवर्कले आफ्नो युद्धका कारण सफलता पाएको बताउँदै आएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग फोनमा सिधा कुरा गर्ने पहिलो तालिबान नेता बरादर थिए । उनले नै अमेरिका र तालिबानबीच कतारको दोहामा भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
जुन सम्झौता अनुसार अमेरिका अफगानिस्तानबाट २० वर्षपछि फर्किएको थियो । उता हक्कानी नेटवर्क अमेरिकी सेनाविरुद्ध सबैभन्दा घातक आक्रमण गर्ने समूहका रुपमा चर्चित छ । हक्कानी नेटवर्कलाई अमेरिकाले अहिले पनि आतंकवादीको सूचीमा राखेको छ ।
विवादको कारण के हो?
स्रोतहरूका अनुसार त्यस्तो विवाद नयाँ उपप्रधानमन्त्री बरादर अन्तरिम सरकारको संरचनासँग असन्तुष्ट भएसँगै सिर्जना भएको बताइएको छ।अफगानिस्तानमा तालिबानको जितको श्रेय कसलाई दिने भन्ने विषयमा विवाद सुरु भएको बताइएको छ। बरादरले आफूजस्ता व्यक्तिले कूटनीतिमा लगाएको जोडबल त्यसको कारण भएको ठानेको बताइएको छ।
यद्यपि केही वरिष्ठ तालिबान नेताहरूले नेतृत्व गरेको हक्कानी समूहका सदस्यहरू र तिनका समर्थकहरू त्यस्तो सफलता युद्धबाट भएको बताउँछन्। बरादर अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग सीधा सम्पर्क गर्ने पहिलो तालिबान नेता हुन्। उनले सन् २०२० मा डोनल्ड ट्रम्पसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए। त्यसअघि उनले अमेरिकी फौज फिर्ता गर्ने विषयमा दोहा सम्झौतामा तालिबानका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए।
हक्कानी सञ्जाल अफगानिस्तान र पश्चिमा देशका सेनामाथि भएका केही घातक आक्रमणहरूमा संलग्न हुने गरेको थियो। अमेरिकाले उक्त संस्थालाई आतङ्ककारी सङ्गठन मानेको छ। उक्त समूहका नेता सिराजुद्दिन हक्कानी अहिले आन्तरिक मामिला मन्त्री छन्।
बरादर सार्वजनिक रूपमा बाहिर देखा पर्न छोडेपछि गत सातादेखि तालिबान नेतृत्वमा विवाद उत्पन्न भएको चर्चा चलेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा उनको मृत्यु भएको हो कि भन्ने संशय पनि व्यक्त भएको थियो। तालिबान स्रोतले बीबीसीलाई बताएअनुसार विवादपछि बरादर काबुलबाट निस्किएर कान्दहार सहर गएका थिए।
सोमवार सार्वजनिक गरिएको बरादरको एउटा श्रव्य वक्तव्यमा उनले आफू यात्रामा बाहिर गएको भनेको सुनिन्छ। उक्त सामग्री तालिबानका विभिन्न वेबसाइटहरूमा राखिएको छ। “अहिले म जहाँ छु हामी सबै जना ठिक छौँ,” उनले भनेका सुनिन्छ। यद्यपि बीबीसीले उक्त सामग्रीको आधिकारिकता पुष्टि गर्न सकेको छैन।
के भन्छ तालिबान?
तालिबानले कुनै विवाद नभएको दाबी गरेको छ। उसका अनुसार बरादर सुरक्षित छन्। तर उनी अहिले कहाँ छन् विषयमा तालिबानले विरोधाभासपूर्ण कुरा भनेको छ। तालिबानका एक प्रवक्ताका अनुसार बरादर तालिबानका सर्वोच्च नेतालाई भेट्न कान्दहार गएका थिए। तर पछि उनले बीबीसी पाश्तोलाई बरादर “थकित भएको र उनले विश्राम गर्न चाहेको” बताए।
सन् २०१५ मा तालिबानले आफ्ना संस्थापक नेता मुल्लाह ओमारको मृत्यु दुई वर्ष लुकाएको स्वीकार गर्‍यो। तर त्यो अवधिमा तालिबानले उनको नाममा विज्ञप्ति जारी गरिरह्यो।
स्रोतहरूका अनुसार बरादर काबुल फर्किने र क्यामारअगाडि बोल्दै कुनै विवाद नभएको बताएको अपेक्षा गरिएको थियो। तालिबानका सर्वोच्न नेता हिबतुल्लाह अखुन्दजादाबारे पनि संशय बाँकी छ। उनी अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा देखा परेका छैनन्। उनी तालिबानको राजनीतिक, सैन्य र धार्मिक विषयका प्रमुख हुन्।
त्यस्तै अफगानी मिडिया टोलो न्यूजका अनुसार तालिबानले पंजशीरमा युद्ध लडिरहेका अमरुल्लाह सालेहको घरबाट साढे ६ मिलियन डलर नगद र १८ वटा सुनका ईट्टा जफत गरिएको दावी गरेको छ । तालिबानले सोमबार यस्तो दावी गरेको छ । तालिबानको सांस्कृतिक आयोग र मल्टिमिडिया शाखाका प्रमुख अब्दुल्लाह मुत्ताकीले एक भिडियो ट्वीट गर्दै यस्तो दावी गरेका हुन् ।
तालिबानको अन्तरिम सरकारमा फुट निम्तिएको छ । तालिबानका वरिष्ठ अधिकारीले सो कुरा बीबीसीलाई जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रपति भवनमा तालिबानका सह–संस्थापक मुल्ला गनी बरादरको समूह र मन्त्रीमण्डलका सदस्यबीच विवाद भएको उनले जानकारी दिए ।
पछिल्ला केही दिनदेखि मुल्ला बरादर सार्वजनिक रुपमा देखिएका छै्रनन् । त्यसपछि नै तालिबानमा नेतृत्वको विषयमा असहमति सतहमा आएको अनुमान लगाइँदै थियो । यद्यपि, यो खबरलाई तालिबानले आधिकारिक रुपमा अस्वीकार गरेको छ ।
तालिबानले अघिल्लो महिना अफगानिस्तानमा कब्जा जमाएको थियो र अफगानिस्तानलाई इस्लामिक गणतन्त्रबाट इस्लामिक इमिरेट्स बनेको घोषणा गरेको थियो । तालिबानले ७ सेप्टेम्बरमा नयाँ मन्त्रीमण्डलको घोषणा गरेको थियो जसमा सबै पुरुष छन् र पछिल्लो दुई दशकमा अमेरिकी बलमाथि हमलाका लागि कुख्यातहरु शीर्ष स्थानमा छन् ।
तालिबानको एक स्रोतले बीबीसीपश्तोसँग बरादर र खलिल उर–रहमानबीच आपसी विवाद भएको जानकारी दिएको छ । उनका अनुसार विवादपछि दुई नेताका समर्थक आपसमा भिडे । खलिल उर–रहमान आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्कका नेता र तालिबानको सरकारमा शरणार्थी मन्त्री हुन् । मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन्दलाई तालिबानले अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाइएको छ ।
बरादर कहाँ छन् ?
बीबीसीसँग तालिबानको स्रोतले बताए अनुसार विवादका कारण बरादर काबुल छोडेर कंधार गएका छन् । सोमबार बरादारको नाममा एउटा अडियो टेप जारी गरियो जसमा उनी यात्राका लागि बाहिर गएको बताइएको छ । उक्त अडियो टेपमा ‘यतिबेला उनी जहाँ छन्, ठिक छन्’ भनिएको छ । उक्त अडियो रेकर्डमा कसको आवाज छ भनेर खोजबिन गरिएको छैन । यो अडियो टेपलाई तालिबानको थुप्रै आधिकारिक वेबसाइटमा पोस्ट गरिएको छ ।
तालिबानले सरकारभित्र कुनै विवाद नभएको र बरादर सुरक्षित भएको बताएको छ । तर हाल बरादर के गरिरहेका छन्, यो विषयमा भिन्न भिन्न कुरा सार्वजनिक भइरहेका छन् । एक प्रवक्ताले बरादर कंधार सर्वोच्च नेतालाई भेट्न गएको बताएका थिए तर पछि उनले पछि उनी थाकेका कारण हाल आराम गर्न चाहेको बताए ।
अफगानी जनताबीच तालिबानको बयानमाथि शंका गर्नुपर्ने थुप्रै कारण छन् । सन् २०१५ मा तालिबानले आफ्ना संस्थापक नेता मुल्ला उमरको मृत्युको खबर दुई वर्षभन्दा बीबीसीसँग स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार बरादर काबुल पुगेर क्यामराको अगाडि आउन सक्छन् र कुनै पनि प्रकारको विवादको कुरालाई खारेज गर्न सक्छन् ।
तालिबानका सर्वोच्च नेता हिब्तुल्लाह अअुन्दजादाको विषयमा पनि विभिन्न प्रकारहको अड्कलबाजी छन् । उनी सार्वजनिक रुपमा कहिल्यै देखिएका नै छैनन् । उनीसँग तालिबानको राजनीतिक, सैन्य र धार्मिक मामिलाको जिम्मेवारी छ । यसैबीच अफगानिस्तानका कार्यकारी विदेश मन्त्रीले मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय दानकर्तासँग पुनः मद्दतको अपिल गरेका छन् ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदारले आफ्नो मद्दतको विषयमा राजनीति गर्न नहुने बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रले अफगानिस्तानमा स्थिति भयानक रुपमा बिग्रने चेतावनी दिएको छ । त्यसपछि एक अर्ब डलरभन्दा बढीको मद्दतका लागि पहल सुरु गरिएको छ । उता हाइटीका प्रधानमन्त्री एरियल हेनरी राष्ट्रपति जोभेनेल मोइसेको ह त्याको मामिलामा मुछिएका छन् ।
यो घटनाबारे अनुसन्धानको लागि उनलाई देश छाड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अभियोजक पक्षले हेनरीमाथि आरोप लगाउनुपर्ने माग गरेको छ । साथै उनीहरुले हेनरीले मोइसेको हत्याका मुख्य संदिग्ध जोसेफ फेलिक्ससँगको सम्बन्धबारे पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन् । अभियोजन पक्षका अनुसार रेकर्डले राष्ट्रपतिको ह त्या भएको केही घण्टामा नै उनीहरुले एकअर्कालाई फोन गरेका थिए ।
राष्ट्रपति जोभेनेल मोइसेको गत जुलाई ७ मा आफ्नै घरमा आ क्र म णकारीले छिरेर आ क्रमण गरेका थिए । राष्ट्रपतिको ह त्या गर्ने आ क्रमणकारी ‘विदेशी र अंग्रेजी तथा स्पेनिस भाषामा कुरा गरिरहेको’ बताइएको छ । अहिलेसम्म प्रहरीले यो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा ४४ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले बताएअनुसार राष्ट्रपतिको शरीरमा १२ गोली लागेको थियो । उनले टाउको, कन्चट, पेट र ढाडमा उक्त गोली लागेको पाइएको थियो । उनको हत्या भएसँगै अहिले हाइटीमा राजनीतिक संकट देखिएको छ । गत महिना हाइटीको दक्षिणी क्षेत्रमा आएको शक्तिशाली भूकम्पको कारण जनजीवन थप अस्तव्यस्त बनेको छ ।